TALATA 11 DESAMBRA 2018
OLAN-TOKANTRANO : Nentina any an-tanindrazany omaly ny razan’ilay polisy
Dimy andro taorian’ny namonoan’ny vadiny an’i Venty dia omaly maraina vao noentina namonjy ny fasan-drazany ny vata-mangatsikany. 9 février 2018
Voalaza fa namela kamboty roa ity raim-pianakaviana namoy ny ainy noho ny fikasihan-tanana nataon’ny vadiny azy. Tsara ny manamarika fa Polisy monisipaly ao Port-Bergé ny lehilahy, izany hoe miasa ao amin’ny Kaominina any an-toerana. Mialoha ny nitondrana azy any amin’ny fasan-drazany dia tonga nanome voninahitra sy nankahery ny fianakaviana ny ben’ny tanàna tao an-toerana sy ireo mpiara-miasa aminy.
Araka ny loharanom-baovao hatrany dia omaly io ihany koa no nitondran’ny Zandary ilay ramatoa vadin’i Venty namono nahafaty azy satria any an-toerana no hitsarana azy. Noho izany dia mbola tsy fantatra ny sazy mety hihatra amin’ity renim-pianakaviana namono vady ity. Hatreto mbola tsy fantatra ihany koa ny tena antony nahatonga ny disadisa tamin’izy mivady ireto ka niafara tamin’ny fikasihan-tanana niafara-tamin’ny fahafatesana izao.
Raha tsiahivina dia ny sabotsy alina lasa teo no nifamaly i Venty sy ny vadiny ka maty noho ny daroka nataon-dramatoa teo amin’ny hatony ny lehilahy. Tao Tsaratanàna Anjobony, Distrikan’i Port Bergé no nisehoan’ity loza mahatsiravina ity.
« Asaivo manamboatra saina dieny izao Ravalomanana » VOKA-PIFIDIANANA FIHODINANA FAHAROA (363) 4 décembre 2018 Niverin-dàlana nampihorohoro SIDINA AN’HABAKABAKA TSARADIA (352) 5 décembre 2018 Tsy nisy mpiraharaha sy nakorain’ny olona ny karnavalin’ny kandidà N° 25 FAMPIELEZAN-KEVITRA ANY ANTSIRANANA (306) 5 décembre 2018 Nanao hetsika ny Holafitry ny mpisolovava HABIBIANA NIHATRA TAMIN’NY MAITRE IALY (266) 4 décembre 2018 Naiditra am-ponja vonjimaika ny roalahy HABIBIANA TAMINA MPISOLOVAVA TETSY ANTANIMENA (135) 5 décembre 2018 Mitombo isa hatrany ireo vahoaka resy lahatra amin’ny filoha Rajoelina FIHODINANA FAHAROA (118) 6 décembre 2018